ပုဏ္ဏ - ဝီကီပီးဒီးယား
(အရှင်ပုဏ္ဏ မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
အရှင်ပုဏ္ဏသည် မြတ်စွာဘုရား၏ သာသနာတွင် အရဟတ္တဖိုလ်သို့ ဆိုက်ရောက်ကာ ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုသွားသည့် ရဟန္တာတစ်ပါးလည်း ဖြစ်သည်။ အရှင်ပုဏ္ဏသည် သုနာပရန္တတိုင်းသို့ သာသနာပြုရန်မသွားရောက်မီ မြတ်စွာဘုရားရှင်နှင့် ပြုလုပ်ခဲ့သည့် အမေးအဖြေကြောင့်လည်း လူသိများသည်။
၂ မြတ်စွာဘုရားနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
ပုဏ္ဏကို သုနာပရန္တတိုင်း၊ သုပ္ပါရကဆိပ်ကမ်းရွာတွင် ဖွားမြင်၏။ ကုန်သည်မျိုးရိုးဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ ပုဏ္ဏလည်း ပင်လယ်ရပ်ခြားသို့ ကုန်ကူးသန်းရောင်းဝယ်သည့်အလုပ်ကို လုပ်ကိုင်သည်။
တစ်ခါသော် ပုဏ္ဏသည် ခရီးသွားကုန်သည်တို့နှင့်အတူ မြတ်စွာဘုရားသီတင်းသုံးရာ သာဝတ္ထိသို့ ရောက်ရှိ၏။ ထို့နောက် ဇေတဝန်ကျောင်းတော်တွင် မြတ်စွာဘုရားထံမှ တရားဓမ္မများ နာကြားရ၏။ ထိုအခါ လူ့ဘဝကို ငြီးငွေ့လာကာ ရဟန်းပြုခွင့်ပေးပါရန် ခွင့်တောင်း၏။ မြတ်စွာဘုရားလည်း ခွင့်ပြုကာ ရဟန်းပြုပေး၏။
အရှင်ပုဏ္ဏသည် သာဝတ္ထိတွင် အရှည်အကြာနေလိုသည့် ဆန္ဒမရှိ။ မိမိ၏ ဇာတိဖြစ်သည့် သုပ္ပါရကသို့ပြန်ကာ ဘုရားရှင်၏ ဓမ္မများကို ဖြန့်ဖြူးလိုသည့် စိတ်ဆန္ဒများ ဖြစ်ပေါ်လာ၏။ ထို့ကြောင့် သုပ္ပါရကသို့ ပြန်ကာ သာသနာပြုခွင့် မြတ်စွာဘုရားထံ တောင်း၏။
ထိုအခါ မြတ်စွာဘုရားက အရှင်ပုဏ္ဏအား မေးခွန်းတို့ကို မေးလေ၏။
ဗုဒ္ဓ။ ။ “ငါ့ရှင် ပုဏ္ဏ၊ သုနာပရန္တတိုင်းသားတို့သည် စကားအပြောအဆို ကြမ်းတမ်းရိုင်းစိုင်းကြ၏။ ထိုတိုင်းသားတို့သည် ငါ့ရှင်ကို ရေရွတ်တိုင်းထွာကြလျှင် သင်မည်သို့ သဘောထားမည်နည်း”။
အရှင်ပုဏ္ဏ။ ။ “မြတ်စွာဘုရား၊ တပည့်တော်အား ရေရွတ်တိုင်းထွာခြင်းပြုလာပါက ထိုတိုင်းသားတို့သည် ရေရွတ်ကြသော်လည်း လက်နှင့် ရိုက်မောင်းခြင်း မလုပ်သည့်အတွက် အလွန်တော်သူများ ဖြစ်သည်ဟု ထင်မှတ်ရပါလိမ့်မည်”။
ဗုဒ္ဓ။ ။ “ငါ့ရှင် ပုဏ္ဏ၊ သုနာပရန္တတိုင်းသားတို့သည် လက်ဖြင့် ရိုက်မောင်းခြင်းကို ပြုကြလျှင် သင်မည်သို့ သဘောထားမည်နည်း။
အရှင်ပုဏ္ဏ။ ။ “ မြတ်စွာဘုရား၊ တပည့်တော်အား ရိုက်မောင်းခြင်းတို့ ပြုလာပါက ရိုက်မောင်းရုံသာပြုလုပ်၏။ အုတ်ခဲ၊ ကျောက်ခဲတို့ဖြင့် မပေါက်ကြသည့်အတွက် သုနာပရန္တတိုင်းသားတို့သည် ကျေးဇူးကြီးမားပါပေ၏ဟု မှတ်ယူရပါလိမ့်မည်”။
ဗုဒ္ဓ။ ။ “ ငါ့ရှင် ပုဏ္ဏ၊ သုနာပရန္တတိုင်းသားတို့သည် အုတ်ခဲ၊ ကျောက်ခဲစသည်တို့ဖြင့် ပစ်ပေါက်လာပါက သင်အဘယ်သို့ သဘောထားမည်နည်း။
အရှင်ပုဏ္ဏ။ ။ “မြတ်စွာဘုရား၊ သုနာပရန္တတိုင်းသားတို့သည် အုတ်ခဲ၊ ကျောက်ခဲတို့ဖြင့် ပစ်ပေါက်ပါက တပည့်တော်ကို တုတ်နှင့် မရိုက်သည့်အတွက် ကျေးဇူးကြီးမားပါပေ၏ဟု မှတ်ယူရပါလိမ့်မည်။
ဗုဒ္ဓ။ ။ “ ငါ့ရှင် ပုဏ္ဏ၊ သုနာပရန္တတိုင်းသားတို့သည် သင့်အား တုတ်ဖြင့်ရိုက်လျှင် သင်မည်ကဲ့သို့ သဘောထားမည်နည်း။
အရှင်ပုဏ္ဏ။ ။ “ မြတ်စွာဘုရား၊ သုနာပရန္တတိုင်းသားတို့သည် တုတ်နှင့်ရိုက်လျှင်လည်း တပည့်တော်ကို လက်နက်တို့ဖြင့် မထိုးနှက်၊ မတိုက်ခိုက်သည့်အတွက် ယဉ်ကျေးသူများ ဖြစ်သည်ဟု သဘောထားကာ သူတို့ကို တပည့်တော်သည် ချီးကျူးစကားများ မပြောကြားဘဲ နေ၍ ဖြစ်လိမ့်မည် မဟုတ်ပါဘုရား”။
ဗုဒ္ဓ။ ။ “ ငါ့ရှင် ပုဏ္ဏ၊ သုနာပရန္တတိုင်းသားတို့သည် သင့်အား လက်နက်တို့ဖြင့် ထိုးနှက်တိုက်ခိုက်မည်ဆိုပါက သင်မည့်သို့ သဘောထားမည်နည်း။
အရှင်ပုဏ္ဏ။ ။ “ မြတ်စွာဘုရား၊ သုနာပရန္တတိုင်းသားတို့သည် တပည့်တော်အား ထက်သောလက်နက်ဖြင့် အဆုံးမစီရင်သည့်အတွက် ကျေးဇူးကြီးမားသူများဖြစ်ကြပါပေသည်ဟု မှတ်ယူရပါလိမ့်မည်”။
ဗုဒ္ဓ။ ။ “ငါ့ရှင် ပုဏ္ဏ၊ သုနာပရန္တတိုင်းသားတို့သည် သင့်အား ထက်သောလက်နက်တို့ဖြင့် အဆုံးစီရင်ပါက သင်မည်သို့ သဘောထားမည်နည်း။
အရှင်ပုဏ္ဏ။ ။ “ မြတ်စွာဘုရား၊ အချို့သောလူတို့သည် အသက်ရှင်ရခြင်းကို ငြီးငွေ့သည့်အတွက် မိမိကိုယ်ကို အဆုံးစီရင်ရန် လက်နက်ရှာကြ၏။ ထိုတိုင်းသားတို့သည် တပည့်တော်အား သတ်လိုက်သည့်အတွက် တပည့်တော်သည် လက်နက်တစ်စုံတရာ ရှာစရာမလိုတော့ပါ။ သို့ဖြစ်ပါ၍ သုနာပရန္တတိုင်းသားတို့သည် တပည့်တော်အတွက် အလွန်တရာကျေးဇူးကြီးမားသူများ ဖြစ်ကြသည်ဟု မှတ်ယူရပါလိမ့်မည်”။
အရှင်ပုဏ္ဏသည် သုနာပရန္တတိုင်းတွင်ပင် ဘဝချုပ်ငြိမ်းသွား၏။ ထိုသတင်းကို ရဟန်းတို့ ကြားလေသောအခါ မြတ်စွာဘုရားအား “ အရှင်ဘုရား၊ ပုဏ္ဏထေရ်သည် ဒေသနာတော်အကျဉ်းကိုသာ နာယူရပြီးလျှင် ကွယ်လွန်သွား၏။ ပုဏ္ဏထေရ်သည် မည်သည့်ဘုံသို့ ရောက်သွားသနည်း။ မည်သည့်ဘဝဖြင့် ပြန်လည်မွေးဖွားသနည်း” ဟု မေးမြန်းလျှောက်ထား၏။ ထိုအခါ မြတ်စွာဘုရားသည် “ရဟန်းတို့၊ ပုဏ္ဏသည် ဓမ္မကို သိမြင်သဘောပေါက်သူဖြစ်၍ ဇီဝိန်ချုပ်သွားသောအခါ ပရိနိဗ္ဗာန အဆင့်သို့ရောက်သွားသည်” ဟု အဖြေပေးတော်မူ၏။
ဤဆောင်းပါးတွင် ဖော်ပြခဲ့သည့် ရဟန်းတော်သည် ဧတဒဂ်ရ အရှင်ပုဏ္ဏ မဟုတ်ပါ။
↑ ၁.၀ ၁.၁ ၁.၂ ၁.၃ ပါရဂူ (၂၀၀၄ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ). ဗောဓိဉာဏ်အလင်းတန်း. ၅၊ ကြာညိုလမ်း၊ ပုဇွန်တောင်၊ ရန်ကုန်: ရွှေစာပေတိုက်, ၈၃၊ ၈၄၊ ၈၅၊ ၈၆၊ ၈၇၊ ၈၈၊ ၈၉။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ပုဏ္ဏ&oldid=501691" မှ ရယူရန်
၁ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၀၊ ၀၆:၅၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။